ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး – Page3– My Doctor
DrMay ThantSyn	2019-01-28T15:30:08+00:00	January 28th, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
အဝလွန်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်မှု အဝလွန်ခြင်းလို့ဆိုလိုက်သည်နှင့် သင့်အနေနဲ့ ဝခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သော အန္တရာယ်များကို သိရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ နှလုံးရောဂါ ၊ သွေးတိုးရောဂါ ၊ ဆီးချိုရောဂါ ၊ အဆစ်အမြစ်ပြသနာအစရှိတာတွေကို သင်သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ ။ ဒါပေမယ့် လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုရှိပါတယ် ။ အလွန်အမင်းဝခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေအခွင့်အရေး နည်းပါးစေပါသတဲ့ ။ အဝလွန်ခြင်းဟာ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သင်ရော သင့်ပါတနာအပေါ်မှာပါ သက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ် ။ (၁) အဝလွန်ခြင်းဟာ သင့်ဟော်မုန်းတွေအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိတယ် သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အညွှန်း (BMI )ပမာဏဟာ အဝလွန်ခြင်းထဲပါနေပါက သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ် ။ ဒီလို ဟော်မုန်းတွေဟာ နဂိုထက်ပြောင်းလဲလာလေလေ ကိုယ်ဝန်ရဖို့အခွင့်အရေး နည်းပါးလေပါပဲ ။ (၂) အဝလွန်ခြင်းဟာ အင်ဆူလင်ဓာတ်
DrMay ThantSyn	2019-01-25T19:09:56+00:00	January 25th, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း စိတ်အပြောင်းအလဲများ အမျိုးသမီးအများစုအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း စိတ်အပြောင်းအလဲဟာ မြန်ဆန်လေ့ရှိပါတယ် ။ဒီလိုစိတ်ခံစားမှု တစ်ခုကနေ တစ်ခု အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲနေခြင်းဟာ စိတ်ပိုတိုစေ စိတ်ပိုပင်ပန်းစေရုံသာမက ဘာလို့ဖြစ်ရလဲ ဘာလို့ဒီလိုခံစားရလဲဆိုတာတွေဟာ အဖြေရှာရ ခက်ခဲတတ်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ ? ပထမဆုံး သင့်ကိုယ်သင် ပြောရမှာက ဒါဟာ ရှက်စရာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း ဒီလိုစိတ်အတက်အကျမြန်တာ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်တာတွေဟာ မျှော်လင့်ထားရမယ့်အရာတွေပါ ။ ဒီလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေဟာ အပြင်ကရော အတွင်းကပါ လာတာပါ ။ ဒါကြောင့် ဒီလို စိတ်ခံစားလွယ်နေတာ စိတ်အလိုမကျတာတွေဟာ ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါပဲ ။ (၁) ဟော်မုန်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်းမှ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုဟာ ပုံမှန်ထက်များပြားနေတတ်ပြီး အထူးသဖြင့်
DrMay ThantSyn	2019-06-18T10:31:49+00:00	January 25th, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
သားကြောဖြတ်ပြီးမှ ကလေးပြန်လိုချင်လျှင် “ လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင် “ ဆိုတဲ့ စကားပုံက အလကားမဟုတ် ….. လူနာတွေဆိုသည်မှာလည်း လွယ်တဲ့အမျိုးတော့ မဟုတ်….. သားကြောဖြတ်ချင်လွန်းလှပါချည့်ရဲ့ ဆိုတာလည်း သူတို့….. သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ မကိုက်ညီသေးလို့ သားကြောမဖြတ်ပေးလို့ စိတ်ဆိုးတာလည်း သူတို့….. အဲ….. သားကြောဖြတ်ပြီးမှ ကလေးပြန်လိုချင်ပါတယ်ဆိုတာလည်း သူတို့….. သို့သော်လည်း …..ဒီလိုလူနာတွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်ပဲ နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေ တီထွင်ကြ ပေါ်လာကြတယ် ပြောရမယ် ခုလည်း သားကြောဖြတ်ပြီးမှ ကလေးပြန်လိုချင်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းအချို့ ပေါ်ထွက်လာပြီ - သားကြောပြန်ဆက်ခြင်း၊ ဖန်ပြွန်သန္ဓေနည်းအသုံးပြုခြင်း…..စတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ အချို့ သားကြောဖြတ်ပြီးသား လူနာတွေမှာ ကလေးပြန်ယူလို့ ရနေပြီ။ ဒီကုသမှုနည်းလမ်းတွေမှာတော့ အခြားကုထုံးတွေလိုပဲ သက်ဆိုင်ရာ အားသာချက်၊အားနည်းချက်၊ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်
DrMay ThantSyn	2019-01-24T09:02:31+00:00	January 24th, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
သားမဲ့သန္ဓေ သားမဲ့သန္ဓေဆိုတာ မျိုးအောင်ပြီး မမျိုးဥဟာ သားအိမ်နရံကိုတွယ်ကပ်ပေမယ့် သန္ဓေသားအဖြစ် ဖွံဖြိုးမှုမရှိလာခြင်းကိုခေါ်ပါတယ် ။ ဒီကိစ္စဟာ ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်း သားပျက်သားလျှောခြင်းဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ အဓိကအဖြစ်များဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်ရံ စောလွန်းတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ရှိမှန်းတောင် မသိလိုက်သည်အထိ ဖြစ်ပွားပါတယ် ။ ဒီသားမဲ့သန္ဓေဖြစ်စဉ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပထမ သုံးလပတ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း နှစ်ကြိမ်လျှင် တစ်ကြိမ် ဟာ ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဖြစ်သ်ာအထိ များပြားပါတယ် ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အခါ မျိုးအောင်ပြီးတဲ့ မမျိုးဥဟာ သားအိမ်နံရံကို တွယ်ကပ်ပြီး ငါးပတ်ကနေ ခြောက်ပတ်ကြာတဲ့အချိန်မှာ သန္ဓေသားလောင်းလေးအဖြစ် စရှိသင့်နေပါပြီ ။ ဒီသားမဲ့သန္ဓေဖြစ်တဲ့အခါ သန္ဓေသားကို ဝန်းရံပြီး အုပ်ထားတဲ့ ရေမွှာအိတ်ဟာ ကြီးလာပေမယ့် အထဲမှာ သန္ဓေသားဟာ မဖွံ့ဖြိုးလာဘဲ ရှိနေပါတယ် ။
DrMay ThantSyn	2019-01-23T08:20:44+00:00	January 23rd, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
ကလေးမွေးပြီးအချင်းကျန်ခြင်း ကလေးမွေးရခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်းဟာ အင်မတန်အန္တရာယ်များတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့စသိရာကနေ ကလေးမွေးပြီးတဲ့အချိန်အထိ ကလေးရောမိခင်ရောကျန်းမာအောင် ဂရုစိုက်နေရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်သလို လွယ်လွယ်ကူကူဘေးကင်းရန်ကင်းမွေးနိုင်ဖို့ကလည်းအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။မီးဖွားရာမှာလည်း အဆင့်3ဆင့်ခွဲထားပြီး သူ့အဆင့်နဲ့သူ အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သားအိမ်ကောင်းကောင်းညှစ်နေပေမယ့် သားအိမ်ခေါင်းကောင်းကောင်းမပွင့်တာ၊ မွေးလမ်းကြောင်းကျဉ်းနေတာ၊ ခေါင်းနဲ့မဆင်းပဲတင်ပါးဆုံနဲ့ဆင်းနေတာ၊မွေးပြီးသွေးသွန်တာတွေကလည်း အရမ်းကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တွေပေးနိုင်ပါတယ်။ မွေးပြီးအချင်းကျန်တာကလည်း ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ကလေးရဲ့တစ်ကိုယ်လုံးမွေးပြီတာနဲ့ အချင်းကိုလည်းချရပါတယ်။ အချင်းမချရင်မွေးပြီးသွေးသွန်နိုင်သလို ချက်ချင်းမကုသနိုင်ရင်အသက်သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။ အချင်းကျန်တယ်ဆိုရာမှာလည်း အချင်းတစ်ခုလုံး ဒါမှမဟုတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကျန်နေရင်လည်း အချင်းကျန်တယ်လို့ခေါ်ပြီး ဘယ်လောက်ပဲကျန်ကျန်စိုးရိမ်ရပါတယ်။အချင်းကျန်နေသေးသရွေ့သွေးမတိတိနိုင်သလို သားအိမ်ကလည်းကောင်းကောင်းကျုံ့နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် အချင်းကိုကုန်စင်အောင်ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်းအချင်းမကျတာနဲ့ အချင်းကျန်နေပြီလို့ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ ကလေးတစ်ကိုယ်လုံးထွက်ပြီး မိနစ်30ကျော်အထိအချင်းမကျတော့မှ အချင်းကျန်တယ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ အချင်းကျန်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ ယခင်ကဗိုက်ခွဲမွေးပြီး အဆိုပါခွဲကြောင်းမှာအချင်းကကပ်နေပြီးကွာကျမလာတာမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သားအိမ်ကောင်းကောင်းမကျုံ့ရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချင်းကျန်တာရဲ့အသိသာဆုံးလက္ခဏာတစ်ခုကတော့ သွေးသွန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သွေးကမတိတ်ပဲဆက်တိုက်ထွက်နေပြီး မိခင်ကတဖြည်းဖြည်းသွေးဆုတ်လာပြီးသွေးပေါင်ကျကာ အသက်ပါသွားနိုင်ပါတယ်။ အချင်းထွက်လာပြီးရင်လည်း အကုန်ထွက်မထွက်စစ်ဆေးရပါတယ်။ အကုန်ထွက်လာပြီဆိုတော့မှ သွေးတိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အချင်းကျန်နေပြီဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံးကျန်နေတဲ့အချင်းကို လက်နဲ့နှိုက်ပြီး
DrMay ThantSyn	2019-01-21T13:36:38+00:00	January 21st, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
က​လေး​မွေးပြီး​နောက်​ပိုင်း ဆံပင်​​​မွှေးကျွတ်​ခြင်းပြသနာ က​လေး​မေ​မေတို့အ​နေနဲ့ ရင်​​သွေး​လေးကို ​မွေးဖွားပြီး​နောက်​ပိုင်း အားပြည့်​​အောင်​ ဘယ်​လိုပြန်​လည်​​နေထိုင်​ရမလဲ၊ ဗိုက်​​အကြာပြတ်​တာ​တွေ အမြန်​​ပျောက်​​အောင်​ ဘာ​တွေလုပ်​ရမလဲ၊က​လေးကို နို့ချို့တိုက်​​ကျွေးဖို့​တွေ၊ ​စောင့်​​ရှောက်​ဖို့​ စသည်​ဖြင့်​ ​တွေး​တောစဉ်းစား​လေ့ရှိကြပါတယ်​... သို့​သော်​ ​မျှော်​လင့်​မထားတတ်​ပဲ ​ပေါ်လာတတ်​တာ​လေးက​တော့ က​​လေး​မွေးပြီး​နေနာက်​ပိုင်းမှာ ယခင်​ကထက်​ ဆံပင်​ကျွတ်​တယ်​လို့ ခံစားရခြင်းပါပဲ... ဒီလိုဖြစ်​ရခြင်းဟာ များ​သောအားဖြင့်​ ပုံမှန်​ပါပဲ...သာမန်ကိစ္စရပ်​​လေးဖြစ်​​ပေမယ့်​ စိတ်​ဖိဆီးမှု​တွေများတဲ့ မီး​နေသည်​၊ နို့တိုက်​မိခင်​အဖို့​တော့ စိတ်​အ​နှောက်​အယှက်​ တစ်​ခုလို မြင်​လာတတ်​ပါတယ်​.. ဒါ​ကြောင့်​"ဘာ​ကြောင့်​ ဆံပင်​ပိုကျွတ်​တာလဲနဲ့.. ​ဆောင်​ရန်​ ​ရှောင်​ရန်​ နည်းလမ်း​လေး​"​တွေ ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​... ဘာ​ကြောင့်​ ဆံပင်​ဟာ ခါတိုင်းထပ်​ ပိုကျွတ်​တာပါလိမ့်​? - ဆံပင်​ကျွတ်​ရခြင်းရဲ့ အဓိက ပြသနာက​တော့ က​လေး​မွေးပြီး​နောက်​ပိုင်း ​ဟော်​မုန်း​ပြောင်းလဲမှု​ကြောင့်​ ဖြစ်​ပါတယ်​...ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ကာလမှာ ​ဟော်​မုန်း​ပြောင်းလဲမှုအများဆုံးဖြစ်​ပါတယ်​... hCG၊ estrogen ၊